एक बिरालो Neutering: को फाइदा र बेफाइदा। castration पछि बिरालो व्यवहार
आज, आफ्नो furry मित्र को धेरै मालिक castration बिरालो आवश्यक, लाभ र यो सञ्चालनको बेफाइदा कि सोच र कसरी यो भविष्यमा आफ्नो व्यवहार असर गर्नेछ छन्। यस लेखमा हामी विस्तृत तपाईं चासो को विषय प्रकट र आफ्नो सबै प्रश्नहरूको जवाफ प्रयास गर्नेछ।
castration के हो र यसको लागि के हो?
एक - एक बिरालो Neutering शल्य प्रक्रिया जसमा testes हटाइएका छन्, प्रजनन समारोह को समापन entails र पुरुष हर्मोन को उत्पादन बन्द छ। लगभग बिरालोहरु मा 7-8 महिना देखा पर्न सुरु यौन आकर्षण विपरीत सेक्स, आफ्नो व्यवहार मा प्रकट भएको छ, जो को व्यक्तिहरूलाई गर्न। रात मा ठूलो पुकारा, सुरु आक्रामक व्यवहार, त्यहाँ घर मा एक अप्रिय गन्ध छ कि परिणाम संग चिन्ह क्षेत्रमा। त्यसैले, यस्तो व्यवहार नगर्न, सञ्चालन प्राथमिकताको बाहिर बारेमा 7-9 महिना मा furry मित्र पहिले नै पर्याप्त बलियो भएका थिए जब लगे, तर अझै सेक्स को सबै Delights प्रयास छैन। अक्सर मात्र castration आफ्नो प्रिय पाल्तु जनावर शान्त र यो धेरै सजिलो र कोमल बनाउन अनुमति छ।
तर, यस्तो सञ्चालन adversely को पाल्तु जनावर स्वास्थ्य असर कि? र के को व्यवहार हुनेछ castration पछि बिरालो? पशु चिकित्सकहरु यो अपरेसन एकदम सरल छ र सामान्यतया कुनै पनि परिणाम बिना बाहिर छ भन्छन्। तथापि, तपाईं एक परिपक्व पाल्तु जनावर भन्दा धेरै यो भने त्यहाँ पुरानो पशु शरीर जवान भन्दा धेरै कमजोर छ रूपमा एनेस्थेसिया, बिरालो castration पछि खेल्न भूमिका छ, त्यसैले त्यहाँ त्यहाँ एनेस्थेसिया यसका निस्कनुहोस् को समयमा कुनै पनि जटिलताहरू हुनेछ कि एक जोखिम छ।
पेशेवरों बिरालो castration
बारी मा पशु चिकित्सकहरु, बिरालो castration लाभ र लगभग कुनै कमियां धेरै छ तर्क। तर यो साँच्चै हो? यो हामी सबै फाइदा र castration को बुरा सूची, देख्न सक्छौं। लाभ तथ्यलाई समावेश:
neutered जनावर अक्सर 1.5-2 अधिक वर्ष बाँच्न;
बिरालो क्षेत्रमा चिनो ceases र कम आक्रामक बन्छन्;
राति चिल्ला रोक्न र बिरालो खोजी;
जनावर धेरै शान्त र थप चंचल हुन्छ;
neutered बिरालोहरु व्यावहारिक यस्तो adenoma, prostatitis र अन्य संक्रमण, castration गर्न subjected थिएनन् कि जनावर गर्न विपरीत रूपमा रोगहरु सामना;
बिरालो थप docile र मनोहर हुन्छ;
मा जो बिरालोहरु, एक युवा उमेर मा castrated थिए, लगभग एक स्तन ट्यूमर गठन भएन।
बिरालोहरु neutering विपक्ष
यस कार्यका पछि, केही पाल्तु जनावर अक्सर जस्ताको तस्तै पुरुष बिरालो भन्दा कम ऊर्जा खर्च रूपमा, ज्यादा र मोटोपना ग्रस्त कि परिणाम संग अल्छी र निष्क्रिय।
कहिलेकाहीं castration पछि बिरालोहरु हृदय प्रणाली को रोगहरु बाट पीडित सुरु, र यो रोक्न, तपाईं सही भोजन चयन गर्न आवश्यक छ।
एनेस्थेसिया पनि पशु लागि जोखिम एक प्रकारको, यो धेरै सानो, त्यसपछि पुरानो बिरालो छ जवान भने केही व्यक्तिहरूलाई र यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ छैन किनभने यो, स्वास्थ्य गर्न एकदम ठूलो जोखिम छ।
सायद ढुङ्गा रोग को उपस्थिति।
Castration, कुनै पनि शल्य प्रक्रिया जस्तै जटिलताओं संग सम्बन्धित हुन सक्छ (तर यी दुर्लभ अवस्थामा छन्)।
तर, प्रभाव धेरै हामी सबै जिम्मेवारी यो सञ्चालन दृष्टिकोण भने बचा गर्न सकिन्छ।
castration पछि बिरालो व्यवहार
यस कार्यका पछि, आफ्नो furry पाल्तु जनावर ठीक समय आवश्यक हुनेछ। यो अवधि सामान्यतया बिरालो तनावमुक्त र निष्क्रिय राज्य हो जो समयमा एक वा दुई दिन, रहन्छ। यो किनभने खाना सेवन आफ्नो पाल्तु जनावर उल्टी हुन सक्छ पूर्ण खान, इन्कार गर्न सक्छन्, यो धेरै ढिलो र सार्न आनाकानी छ, यो सबै सर्जरी र एनेस्थेसिया को नतिजा हो, त्यसैले कुनै आवश्यकता विशेष गरी चिन्ता गर्न। यो समयमा, furry मित्र उहाँलाई समर्थित धेरै महत्त्वपूर्ण छ, उहाँलाई धेरै ध्यान दिन र दया देखाउन। तपाईं समन्वय को हानि को, यो एक उचाइ देखि पर्न सक्छ किनभने ध्यान, आफ्नो मनपर्ने अनुगमन र आफूलाई केही चोट राख्नु आवश्यक छ। यसलाई न्यानो कम्बल उहाँलाई कवर वा ब्याट्री न्यानो अर्को राख्न सम्भव छ लागि यो बिरालो मृत्यु स्थिर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सञ्चालन पछि5घण्टा तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर पानी दिन आवश्यक छ। निस्सन्देह, बिरालो castration, लाभ र बेफाइदा हामी छलफल गरेको, जनावर मा एक महान नाली।
सर्जरी पछि पशु को अवस्था
तपाईं पनि जनावरको मा कुर्सी को उपस्थिति विशेष ध्यान गर्न आवश्यक छ। तीन दिन भित्र भने, तपाईं बनाउन तपाईं बिरालो डाक्टर डाक्टर देखाउन निश्चित, यो खाली छैन सकिन्छ याद हुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - को निको निगरानी गर्न postoperative suture। सामान्यतया जनावर मतलब छैन, तर यो ठाउँ मा जाने र घाउ चाट्नेछन् गर्न प्रयास गर्न सुरु भने, यो तपाईंको पशुचिकित्सा व्यवहार गर्न निकट भविष्यमा एक विशेष घाँटी कलर र सिउनी मा उहाँलाई राख्न आवश्यक छ। को postoperative अवधिको सिउनी आक्रान्त छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कुरा, र यो वरिपरि कुनै गीला मा, बिरालो तापमान 39 डिग्री माथि, अधिक तीन दिनको लागि राखिएको छ, र त्यो कम गरिएको छैन (37 डिग्री तल)।
शक्ति castrated बिरालो गर्न पनि, धेरै गम्भीर, किनभने एक जबकि पशु हर्मोन परिवर्तन पछि लग्नु गर्नुपर्छ। Castrated बिरालो कम ऊर्जा खर्च गर्न सुरु, त्यसैले यसको शरीर कम क्यालोरी आवश्यकता हो, र आफ्नो भोक नै रहनेछ। तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर को सही आहार पालना भने, तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावर मोटोपना र रोग urolithiasis जोगिन सक्छौं।
यस लेखमा हामी के बिरालो castration देख्यो, पेशेवरों र सर्जरी को बुरा, साथै सर्जरी पछि घरपालुवा जनावर व्यवहार। निस्सन्देह, तपाईंले यस्तो विकल्प गर्नुअघि भने, यसलाई तपाईं हो। तपाईं र बेफाइदा vzesit गर्न आवश्यक सबै को पहिलो, आफ्नो पशुचिकित्सा परामर्श, र केवल त्यसपछि निर्णय। तपाईं अझै पनि बिरालो तटस्थ गर्न dared छैन भने, तपाईँले प्रत्येक पशु चिकित्सकहरु हाल बेचिन्छ विशेष ट्याब्लेटको प्रयोग गर्न, एक राउन्डअबाउटबाट तरिका जान सक्नुहुन्छ।
तपाईं बस जस्तो आफ्नो पाल्तु जनावर सर्जरी, राम्रो कारण बिना छ निर्णय भने, यो छुँदै राम्रो छ, र फेरि, चिकित्सा विधिहरू गर्न Resort गर्न। बिरालो castration, हामी पहिले नै छलफल गरेको को फाइदा र बेफाइदा, यो आवश्यक छ, यो एक राम्रो प्रतिष्ठा संग शहर को सबै भन्दा राम्रो क्लीनिक को एक चयन र ठीक त्यहाँ जान रहनेछ। किनभने सञ्चालन बाहिर गरिनेछ आफ्नो पाल्तु जनावर भविष्य जीवन निर्भर हुनेछ कसरी व्यावसायिक को सुरक्षित गर्न, कुनै आवश्यक छैन।
कुकुर को मूल: इतिहास र रोचक तथ्य
के यसको लागि के, र यो कसरी प्रयोग गर्ने, बिरालोहरु को लागि एक कलर छ
को खरायो लागि घाँस। के खरायो घाँस खान? के घाँस खरायो छैन दिनुपर्छ?
सानो कुकुर जातिहरु को नाम। फोटो संग सानो कुकुर पाल्नु
बिरालोहरु मा कीडे। रोग को उपचार
सबै भन्दा ठूलो जो ग्रह को सौर्य प्रणाली छ? को सौर्य प्रणाली को सबै भन्दा ठूलो ग्रह
चेलाहरूले ll। कोड "Disaypls 2»
के बाट Lofer लगाउन? आधुनिक व्याख्या मा क्लासिक
को VAZ-2114 मा छेउमा दर्पण कसरी विस्थापन गर्न?
कसरी चरणमा एक रूसी लोक पोशाक आकर्षित गर्न
बोलीको व्याकरण संरचना - यो ... छोराछोरी को बोली को व्याकरण संरचना को गठन
एप्लेटका साथ लेटेन पाई
लक्षण laryngeal क्यान्सर र रोग को चरण
पोर्ट Ghalib Resort5* Marsa आलम: होटल समीक्षा र फोटो
कुन उमेरबाट आपराधिक जिम्मेवारी उत्पन्न हुन्छ
Shvarts Evgeniy Lvovich: संक्षिप्त जीवनी, रचनात्मकता